China GOLF SOLAR GARDEN Jiro mpanamboatra sy mpamatsy | ALife
Ny jiro golf masoandro dia miaraka amina endrika kanto sy famolavolana modely fampidirana. Ny ekipa mpamorona indostrialy matihanina dia manamboatra tontonana masoandro, loharano maivana, mpanara-maso, batery mifangaro; Miaraka amin'ny Philips Lumileds, ny fantsom-pahazavana, ny fivoahan'ny hazavana, ny fahombiazany ary ny fiainana amin'ny serivisy dia mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Ny mari-pana amin'ny loko dia azo ahitsy arakaraka ny fiovan'ny vanim-potoana. Ny hazavana mangatsiaka sy mafana an'ny 3000K - 6500k dia azo alamina hamaly ny filan'ny jiro amin'ny tontolo samihafa.
Teknolojia radar manan-tsaina hiditra amin'ny microwave. Ny fampidirana microwave dia afaka manitsy ny famirapiratan'ny jiro miaraka amin'ny fihetsiky ny zavatra, mitsitsy angovo kokoa, mahaolona; Fitsipika marani-tsaina mahery: mitsara ho azy ny toetrandro ary mandamina araka ny antonony ny lalàna mifehy ny famoahana;
Famolavolana manan-tsaina: rafitra fanaraha-maso micro-solosaina mifehy, fifehezana manan-danja amin'ny fiampangana sy ny fivoahana, fomba fiasa marobe, ataovy mahomby sy mahavonjy angovo ny rafitra iray manontolo; Fampandehanan-drakitra sy fitantanana fanalefahana manan-tsaina: fiampangana sy famoahana fiarovana malefaka sy mafy sy teknolojia fandanjalanjana manan-tsaina, fihenan'ny tsingerina ary famoahana mihoatra ny in-2000; Ny jiro azo esorina dia mety amin'ny fametrahana sy fitaterana.
Golf Components Ny Golf Solar Garden Lighting
Hery naoty: 40AH
Naoty naoty: 3.2VDC
Modely famaritana: KZ32
Fitaovana: aliminioma profil + aluminium maty maty
Naoty naoty: 6V
Hery naoty: 10W
Hery naoty: 18W
Parameteran'ny jiro Golf Solar Garden
Vovonana mono: 5V / 18W
Karazana loharano maivana
Karazana fizarana maivana
Lensa Batwing (150 × 75 °)
10 + ~ + 60 ℃
Ny lanjan'ireo vokatra
Teo aloha: MAZAVA FANAMARANA MAZA MAVAINA
Manaraka: Jiro MAZAVA MAZAVA MAZAVA
Jiro Solar Street tsara indrindra
Jiro amin'ny lalana amin'ny masoandro
Jiro an-dàlana momba ny masoandro
Solar Modules amidy
Modely Solar Photovoltaic
Modely momba ny herin'ny masoandro
Module Solar Pv
Sarany maivana amin'ny masoandro
Solar Street Light ho an'ny trano
Solar Street Light miaraka amin'ny bateria
Rafitra jiro amin'ny masoandro
MONO-90W Ary PLOY-90W
TANY SOLAR PANEL CHARGER 60W AMIN'NY PORT USB ...